Boordiin filannoo dabalataan paartilee lama haqe | OROMSIIS OROMO
Leave a Comment	/ December 28, 2020 December 28, 2020
Ibsa boordichi waaree booda baasen Paartiin Dimookiraatawaa Ummata Oromoo Maraa jedhamuufi Paartiin Dimookiraatawaa Biyyaalessaa Sidaamaa haqamaniiru jedheera.Paartileen kunneen ulaagaa barbaachisu hin guunne jedhe boordichi. Mallattoon hundeeffamaa paartiin jalqabaa walitti qabe keessaa dhugaa ta’e kan argame 35% gadidha jedhe.Paartiin Sidaamaas kanneen paarticha hundeessan keessaa 778 ragaan jireenyaa isaanii hin guutamne jedheera. Torban darbe paartileen 26 ulaagaa hin guunne jedhaman haqamanuun ni yaadatama.Boordichi paartilee filannoof qophaa’aa jiran irratti ulaagaa paartileen guutuu qaban bu’uureffachuun qorannoo erga gaggeessaa turee booda murtee dabarsuu beeksiseera.Kanneen haqaman keessaa paartiin ABO – Gamtoome murtee darbe mormuun isaa ni yaadatama. Paartileen kana dura haqaman kami? :
Suuraa: Boordii Filannoo